VirtualDJ Home for Mac Review | MacArsenal o
> Resource > Mac > Atomix Productions: VirtualDJ Home for Mac
Iyadoo in ka badan hal milyan oo downloads bil kasta, Virtual DJ Home for Mac waa software ah aad loo jecel yahay oo fantastik ah DJ gudaha. Waxaa sidoo kale waxa uu qiray in hogaamiye ugu weyn ee DJing digital aan code mar. Waxaad isticmaali kartaa Nagatimo, ku garaacday ku habboon.
Mix Music khibradda
Qalabaysan sampler ka beehsa iyo engine loop aan xuduud lahayn si toos ah, VirtualDJ Home kuu ogolaanaya inaad si layaab music remix hawada. Sababo la beatlock engine goynta-ku laayeen, waxaad samayn kartaa wiilal aad xaq ku garaaca iyo habka isku dhafka ah sida iska cad waa dhakhso badan DJ kasta oo kale. Waxa kaliya ee aad samayn lahaydeen oo waa in isku day ah. Waxaad ka heli doontaa waxa sahlan oo wanaagsan sctratch iyo qas karaoke music iyo videos.
Interface ayaa la casriyeeyay waa version ugu fiican abid. Qeybta hoose, waxaa jira liis ah track kaas oo loogu talagalay in uu soo bandhigo farshaxanka album. In dhexe ee interface ah, set oo ah albabka, badhamada iyo sliders xakamayn kartaa habka qodan. Laba ilaaliyaal ugu sareysa waxaa ka mid ah kuwan raadkaygay audio.
Samee software aad kartoo
VirtualDJ ku qalabeysan yahay kun harag dambeeyay bixi karo iyo luqada VDJScript boosaska badan. Si aad u shakhsiyeeyo karaa si waafaqsan aragtida iyo baahida loo qabo. The raadinta multi-hadalka waxa kale oo aad ka faa'iidaysan kartaa wax badan.
Sida mid ka mid ah codsiyada DJ ugu fiican, VirtualDJ Home door la bedeli karin agagaarka beerta app DJ ah. Sababtoo ah halka ay qaab xirfadeed, waxaa uu qiray in ay boqolaal ka mid ah DJ iyo xiddigo, alaabooyinka DJ keentay iyo sidoo kale, sida Numark, Denon, Pioneer, Gemini, Hercules, ama Vestax, Haddii aad doonayso in la qabto koox ka mid ah oo xiiso leh oo la music qodan kaamil ah , oo lacag la'aan ah VirtualDJ Home xaqiiqdii waa doorashada ugu fiican ee aad u soo dejisan.
Download Vdownloader ugu fiican ee Mac